एक ट्विटर, YouTube, Vimeo, फ्लिकर, काउन्टडाउन, वा अन्य विजेट बनाउनुहोस्
विजेटबक्सबाट विजेट्सको साथ सगाई ड्राइभ गर्नुहोस्
सोमवार, जुलाई 2, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
विजेटहरू कम महत्त्वका अनुप्रयोगहरू हुन् जसले सगाई ड्राइव गर्न सक्छन्। प्राविधिक रूपमा, विजेटहरू सानो वा माइक्रो अनुप्रयोगहरू हुन् जुन वेबपृष्ठ भित्र स्थापित हुन सक्दछन्। अधिक घडीहरू, उल्टो उल्टा गिनती टाइमरहरू, र वेब पृष्ठहरूमा अन्य गतिशील जानकारी वास्तवमा विजेटहरू हुन्। हाम्रो साइट मा, तपाईले केहि धेरै पाउनुहुनेछ - शीर्ष पोष्टहरू, twitter, पोडकास्ट र फेसबुक लेख सिफारिशहरू।
विजेटहरूले अन्यथा नराम्रो जानकारीलाई अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ, अधिक संभावना वेब विजिटरको ध्यान खिच्न। उदाहरण को लागी, एक सर्वेक्षण विजेट वेबसाइट मा बनाईएको सर्वेक्षण गर्न आगन्तुक नेतृत्व, फेसबुक विजेट ब्रान्ड को सामाजिक पेज मा नेतृत्व गर्न सक्छ। विजेटहरूले समग्र रिपोर्टहरू मद्दत गर्दछ, यसलाई विश्लेषणात्मक-आधारित निर्णय लिनका लागि शक्ति प्रदान गर्दछ।
विगतमा विजेटहरूका साथ सबैभन्दा ठूलो अवरोधले उनीहरूलाई विकास गरिरहेको थियो। विजेटबक्स विभिन्न उद्देश्यका लागि रेडिमेड विजेटहरू प्रदान गर्दछ। यसले iz 46,000,००० भन्दा बढी विजेटहरू प्रदान गर्दछ, अनुकूलन विकल्पहरूको साथ, वेब पृष्ठ कोडमा सिधा डाउनलोड गर्न सकिने। यसले मार्केटरलाई माउसको केहि क्लिकहरूको साथ उनीहरूको आफ्नै अनुकूलित विजेटहरू सिर्जना गर्न, र वेबपृष्ठ कोडमा स्वचालित-उत्पन्न कोडलाई आवश्यक ठाउँमा पेस्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
WidgetBox को एक सिंहावलोकन हेर्नुहोस्:
विजेटबक्सले तपाईंलाई विजेट कहाँ र कहाँ प्रयोग गरेको ट्र्याक राख्न मद्दत गर्दछ। किनकि प्रत्येक विजेट एक विशिष्ट सेवाको क्याप्सुल हो, त्यसैले मार्केटर्सहरूले कुन विशिष्ट सेवाले सबैभन्दा बढी दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ, डिमांडको डेमोग्राफिक्स र अन्य महत्त्वपूर्ण विश्लेषकहरू पत्ता लगाउन सक्दछन्।
धेरै राम्रो! यस महान उपकरण को लागी धेरै धन्यवाद!
तपाईंको सोशल मिडिया पृष्ठहरूमा विगेट्स हुनु भनेको मलाई लाग्छ,
एक व्यवसाय को लागी वास्तवमै महत्वपूर्ण छ। होइन कि उनीहरूको लागि विजेटहरू हुनुपर्दछ
सबै कुरा र सबै पछि: केहि धेरै को एक खराब कुरा हो। तर
जब उचित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र मध्यममा, विजेटहरू र useful्गीन उपयोगी मार्केटिंग हुन सक्छ
उपकरण। किन? किनकि यसले अनलाईन प्रयोगकर्तालाई सजिलैसँग तपाईंको FB मा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ,
माइस्पेस, ट्विटर, फ्लिकर, यूट्यूब, आदि।
विजेटबक्सले अन्य उपकरणहरू थप्न सजिलो बनाएको जस्तो देखिन्छ
पोल, फाराम, स्लाइड शो, आदि को लागी तिनीहरूको विजेट संग पनि। मूल रूपमा यो आउँछ
तल कत्तिको सजिलो छ तपाईंको प्रयोगकर्तालाई तपाईंको ब्रान्डसँग अन्तर्क्रिया गर्न।
तर केवल यो किनभने तपाईले यो विजेटको साथ सजिलो बनाउँनुको मतलब छैन
तपाईं सफल हुनुहुनेछ। तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि सामग्री पनि राम्रो छ। मलाई राष्ट्रीय थाहा छ
स्थितिहरूले यो धेरै राम्रो गर्छ। तिनीहरू गुणवत्ता लि quality्कमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छन्
केहि समय को लागी प्रयोग सजिलो संग। म पक्का छु कि उनीहरूले आफ्नो उपकरणमा विजेटहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्
त्यसोभए हामी सबैले!